ललितपुरमा ‘बिउ एटीएम’ संचालन, पैसा हाल्दा कसरी आउँछ बिउ ? - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
ललितपुरमा ‘बिउ एटीएम’ संचालन, पैसा हाल्दा कसरी आउँछ बिउ ?
ललितपुर । ललितपुर महानगरपालिकाले ‘बिउ एटीएम’ पनि संचालनमा ल्याएको छ । ललितपुर महानगरपालिकाले सहरी खेती साझेदारी कार्यक्रम अन्तरगत कृषकहरुलाई उन्नतस्तरको बिउ एटीएममार्फत् उपलब्ध गराउने गरी सो एटीएम संचालनमा ल्याएको हो ।
आइतबार ललितपुरमा एक कार्यक्रममा बीच कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव युवकध्वज जिसीको उपस्थितिमा ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जनले सो प्रविधिको पनि उद्घाटन गरेका हुन् । उनले सहरी कृषकहरुको उत्पादनमा बढावा दिने उद्देश्यका साथ उन्नत विउ विजन वितरणका लागि बिउ एटियमको पनि व्यवस्था गरिएको स्पष्ट पारे । त्यसमा ३६ जातका तरकारी तथा फलफूलको उन्नत विउ पाउने व्यवस्था पनि गरिएको ललितपुर महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
२०, ५० र १०० मूल्यका सफा नोट एटीएममा घुसाएपछि उनीहरुले चाहे अनुसारको बिउको चित्र आउने र सोही चित्रमा थिचेपछि आवश्यक बिउ प्राप्त गर्ने व्यवस्था सो एटीएम गरिएको छ ।
ललितपुर महानगरपालिकाले ‘पानी एटीएम’ पनि संचालन गरिसकेको छ । मेयर महर्जनले सहरी क्षेत्रको उचित व्यवस्थापनका लागि ‘साईकल लेन’को व्यवस्था गर्ने कामलाई पनि अघि बढाइएको जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव जिसीले प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग मिलेर कृषि उत्पादनमा बढावा दिन नयाँ–नयाँ प्रविधिको विकास गर्न सरकार तयार रहेको बताए । उनले कृषिमा निर्भर मुलुकलाई अघि बढाउन कृषि क्षेत्रको विकासमा तीन वटै तहबीच मिलेर काम गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए ।
ललितपुर महानगरपालिकाले नौं लाख लगानीमा स्थापना गरेको सो मेसिनको सेवा सबै वडामा संचालनमा ल्याउने तयारी पनि गरेको छ ।
मेलम्ची, २६ जेठ - बहुप्रतिक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजना काठमाडौँवासीका लागि उत्साहको विषय बने पनि […]
असार २५। बाजुरा, मानाकोट–८ की राजदेवी रोकाया अहिले घरको कामधन्दाबाट बचेको समयमा सिस्नो टिपेर सुकाउने गरेकी […]
कांग्रेसद्वारा सरकारविरुद्ध देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारविरुद्ध देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।चिकित्सा […]
नेकपाको आकस्मिक बैठक, डा.केसीलाई काठमाडौं ल्याउने निर्णय
काठमाडौं । जुम्लामा अनशनरत डा.गोविन्द केसीलाई काठमाडौंमा ल्याएर उपचार गर्ने निर्णय भएको छ । नेपाल […]
भुकम्प पीडितको १८ अर्ब बैंकमै थन्कियो
असार ५ । राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरणले अनुदानको दोस्रो किस्ताको लागी भुकम्प प्रभावित १४ जिल्लामा पठाएको […]
रेशम चौधरीलाई जेल भित्रै शपथ खुवाउने तयारीमा सरकार
काठमाडौं । साढे दुई वर्षअगाडिको ‘टीकापुर घटना’ का मुख्य आरोपी रेशम चौधरीलाई ‘जेलभित्रै’ प्रतिनिधिसभा सांसदको […]